लगानीकर्ताको आँखामा सगून - Enepalese.com
इनेप्लिज २०७३ माघ ११ गते २:०० मा प्रकाशित
सगून के हो?सगून अमेरिकामा दर्ता भएको स्टार्टअप आइटी कम्पनी हो । अर्थात सगून भरखरै शुरु भएर विस्तारै बामे सर्ने अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको छ। यसका देशीय कार्यालयहरु भारतको दिल्ली र नेपालको काठमाडौंमा छन् । यो ‘BuildingaRewarding Life Through the Innovative Social Path: Connect. Share. Earn’ ध्येय (Mission)रहेको सगूनले अमेरिकाको आर्थिक कारोवारको बजार (Financial Market)मा औपचारिक रुपमा प्रवेश गर्न अमेरिकी सेक्युरिटी एक्सचेञ्ज कमिशन (US Security Exchange Commission -SEC)मा आवेदन पेश गरि स्विकृतीको प्रतिक्षा गरिरहेको छ । SEC बाट स्वीकृत प्राप्त भएपछि सगून मिनि आइपीओमा प्रवेश गर्छ र त्यही अनुसार यसले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई सगूनमा लगानीको लागि आह्वान गर्नेछ ।
फेसबुक सन् २००४ तिर स्टार्टअप कम्पनीको हैसियतमा नै थियो । यसको आफ्नै प्रशस्त लगानी थिएन । प्रयोगकर्ता पनि थोरै थिए । यसको भविष्यको बारेमा पनि अनिश्चितता थियो । अर्थात अहिलेको सगुन जस्तै अवस्था थियो । त्यसबेला फेसबुकले आफ्नो शेयर सस्तोमा बेच्थ्यो । तैपनि मानिसहरु किन्न हिच्किचाउँथे । त्यसबेला एक डलरमा बेचेको फेसबुकको शेयरको मूल्य अहिले बजारमा करिब १२०० डलर भन्दा बढी पर्छ । त्यसबेला (स्टार्टअपको अवस्थामा) शेयर किन्नेले १२०० गुणा फाइदा पाए । त्यहि शेयर अहिले हामी स्टक मार्केटबाट १२०० डलरमा किन्छौँ तर अब त्यसको मूल्य अर्को १२०० गुणाले बढ्ने सम्भावना अन्यन्तै कम छ जसरी स्टार्टअप अवस्थामा किनेको त्यहि कम्पनीको शेयरको मूल्य बढेको थियो ।
यसरी फेसबुक स्टार्टअप कम्पनी भएको बेलामा शेयर किन्नेहरुले राम्रो आम्दानी गर्न सफल भए । सगुन अहिले स्टार्टअप कम्पनी हो । सामान्य बुझाइमा यसको भविष्य अझै अनिश्चित छ । त्यसैले यसको शेयर मूल्य पनि कम छ । यो अनिश्चितता चिर्दै सगुन सफल भए पछि फेसबुकको लगानी कर्ताले १ को १२०० प्रतिफल पाए जस्तै सगूनका लगानीकर्ताले पनि प्रतिफल पाउँछन् । यस्तो प्रतिफलको स्केल फेसबुकको भन्दा धेरै वा थोरै वा उस्तै कुनै पनि हुनसक्छ ।